Ifektri Yabantu Abadala - Abakhiqizi baseChina Abadala, abahlinzeki
GPS Tracker / Asebekhulile / GT-E01
Le modeli smart tracker ikakhulukazi eyokuguga, izici ezigcwele ziqapha isikhundla sabadala nesimo sabo sempilo. Kungaba ibanga elide, ngaphandle kokukhathazeka awukho edolobheni elifanayo. Kususelwa kubuchwepheshe obuningi besikhundla, i-GPS + WIFI + LBS, nama-suites womhlaba wonke.
Isongo linqunyelwe amalungu angama-15 okuxhumana ngocingo, kuphela inombolo yocingo erekhodiwe engashayela ukuxhumana kwemiyalezo nomyalezo wezwi, ivimba ezinye izinkinga ezingaba khona nenkinga yezokuphepha. Ingasetha uthango lukagesi ngebanga lokuphepha, izokwenza i-alamu uma iphuma ocingweni.
Ingabheka umfutho wegazi, ukushaya kwenhliziyo, ngaso sonke isikhathi ilawule isimo sempilo. Ungumsizi omuhle wokuqapha izihlobo zabantu abadala.
GPS Tracker / Asebekhulile / GT-E02
Le modeli ye-4G smart watch inikeza ukuma, ukuqapha ezempilo nemisebenzi yocingo / yevidiyo, ukuvikelwa okugcwele kwezihlobo esezikhulile.
Ngokubekwa endaweni, kunemba endaweni engama-20m. Kungasethwa ucingo lukagesi, futhi kuzokwenza i-alamu uma ingaphandle kwendawo yocingo.
Ngokuqapha impilo, kuyasiza ukuqapha ukucindezelwa kwegazi, ukuqapha umoya-mpilo wegazi, ukuqapha izinga lokushisa komzimba nokuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo. Umuntu angathola idatha yezempilo yomdala noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi. Futhi inikeza i-alamu yokulwa nokuwa, ukhiye owodwa we-SOS wosizo, i-alamu yezempilo engajwayelekile. Nikeza futhi isikhumbuzi sokuhlala kanye nezinyathelo zokubala umsebenzi ukukhumbuza impilo yezempilo.
Ngocingo noma ikholi yevidiyo, kukhawulelwe kuhlu lwezinombolo ezirekhodiwe, vimba inkathazo futhi uphephe. Umuntu ngeke akhathazeke ngosizo lwale tracker smart lwabadala.
GPS Tracker / Asebekhulile / GT-E03
Le modeli smart tracker eyenzelwe abadala, ivikela impilo yabo nokuphepha. Isebenza njengokubeka ngokunembile indawo, ukubekwa kocingo lukagesi endaweni ephephile, i-alamu ewayo, ukuqapha ukucindezelwa kwegazi, ukuqapha ukushaya kwenhliziyo, ukhiye owodwa weSOS wosizo njll.
Inethiwekhi ye-4G iyenza ikwazi ukuxhumana kahle kwevidiyo. Konke ukuxhumana kwemiyalezo yezwi, ikholi yevidiyo nekholi yezwi kungaphakathi kweqembu elixhunywe ku-APP uhlu lwezinombolo ezirekhodiwe, vimba inkathazo futhi uphephe ekugugeni.
Umdala angahlala efaka iwashi noma ngabe umsebenzi wasendlini, awunamanzi nge-IP67, ngaphandle kokulimaza igobolondo, le divayisi ngeke ibe nomthelela omubi kumkhiqizo uma uphonswa emanzini angaphansi kwe-1M ukujula futhi ucwiliswe kungakapheli imizuzu engama-30.
GPS Tracker / Asebekhulile / GT-E04
Le modeli smart tracker inokukhetha kwemibala emi-3, eyenzelwe umdala, inkinobho enkulu ene-braille, etholakalela umuntu ongaboni. Umsebenzi oyinhloko wewashi smart ukubeka indawo nokuxhumana ngezingcingo.
Ingabheka umfutho wegazi, ukushaya kwenhliziyo nokushisa komzimba, ngaso sonke isikhathi ilawula isimo sempilo. Ukuwa kwe-alamu, ngaphandle kwe-alamu yocingo kagesi, thola isikhundla kanye nekholi eyodwa yokhiye we-SOS, kungumsizi omkhulu wokuqapha isimo sezempilo nokuguga kwabantu abadala.
Isongo lisethe amalungu amhlophe okuxhumana ohlwini, mhlophe kuphela inombolo yocingo erekhodiwe engakwazi ukuxhumana nokuxhumana nomyalezo wezwi, ivimba ezinye izinkinga ezingaba khona nenkinga yezokuphepha. Umsebenzisi we-APP angaqapha ividiyo yomdala.
GPS Tracker / Asebekhulile / GT-E05
Le modeli enhle eyenziwe nge-smart tracker eyabadala, imisebenzi esemqoka njengokuqapha impilo yabo kanye nokuma kwabo okuphephile. Umsebenzi wesikhundla sayo usekelwe kubuchwepheshe besikhundla obuningi, i-GPS + WIFI + LBS, nama-suites womhlaba wonke. Kungaba ukuqapha kwebanga elide, ungakhathazeki ukuthi awukho edolobheni elifanayo. Futhi uma umdala ephuma ocingweni lukagesi, i-alamu izosebenza.
Kwezempilo, sonke isikhathi sihlola umfutho wegazi, umoya-mpilo wegazi, ukushaya kwenhliziyo nokushisa komzimba. Izokwazisa ku-1st isikhathi uma impilo ingajwayelekile.
Okokuxhumana, kusethwe kuphela ukuxhumana okunomkhawulo ngaphakathi kohlu lwabamhlophe okurekhodiwe amalungu, kanye nokuxhumana ngezwi ngaphakathi kweqembu elixhunywe nge-APP, gwema ezinye izinkinga ezingaba khona nenkinga yezokuphepha.
GPS Tracker / Asebekhulile / GT-E06
Le modeli smart tracker eyenzelwe abantu asebekhulile kodwa ngokubukeka okunamandla. Kungasiza ukubeka abadala, nokuqapha impilo yabo, futhi kungasetshenziswa njengomakhalekhukhwini.
Kususelwa kubuchwepheshe besikhundla se-GPS + WIFI + LBS + AGPS, nama-suites womhlaba wonke, angathola ngqo asebekhulile ngaphakathi kwe-20m emnyango nangaphandle kwe-200m, izicingo ezimbalwa zikagesi zisebenza ukuqinisekisa ukuthi asebekhulile endaweni ephephile. It real-time uqaphe umfutho wegazi, uqaphe ukushaya kwenhliziyo neoksijini yegazi, noma yikuphi okungajwayelekile ungathola umyalezo okokuqala futhi wenze ukusabela.
Kuyi-smart phone futhi, ikholi yevidiyo, ukuxoxa ngomyalezo wezwi, ucingo. Kungenxa yeringithoni, ungakhathazeki ngokuthi asebekhulile abakwazi ukuzwa ubizo lwakho. Kukubiza ukhiye owodwa we-SOS wesimo esiphuthumayo. Futhi i-tracker ayinamanzi nemvula yokukhathazeka, ayinamanzi ezingeni le-IP67, ingayigqoka lapho kwenziwa umsebenzi wasendlini, noma ingayigqoka lapho ibhukuda.
GPS Tracker / Asebekhulile / GT-E07
Le modeli GPS tracker eyenzelwe ikakhulukazi asebekhulile ngomsebenzi wezokuxhumana nokuqapha impilo. Babanakekela ngokuphelele asebekhulile. Umsebenzi wesikhundla usekelwe kubuchwepheshe obuningi, i-GPS + AGPS + LBS + WIFI engathola isikhundla ngokunemba kwe-5m, awukhathazeki ukuthi abantu abadala bayalahleka, ungathola isikhathi sangempela ukuthola noma kunini emhlabeni. Futhi usetha uthango lukagesi, uma oyisebenzisayo ezophuma endaweni i-APP yakho izokwazisa.
Ihlola ukushisa komzimba, umfutho wegazi, i-oxygen yegazi nokushaya kwenhliziyo, uzokwazi noma yini engajwayelekile okokuqala bese uthatha isinyathelo. Ine-alamu yokuwa, futhi i-SOS ukhiye owodwa wosizo, uzothola ukuxhumana lapho besenkingeni.
Okokuxhumana, kunikeza ikholi yevidiyo ye-HD, ikholi yezwi nokuxhumana kwemiyalezo yezwi, kepha kukhawulelwe ezinombolweni zohlu ezirekhodiwe ezigwema ubungozi obungaba khona kubantu ongabazi.
Akungenwa manzi ezingeni le-IP67, ungakhathazeki ngamanzi ajwayelekile okuphila nemvula. Uma ufaka i-tracker emanzini ingajuli ngaphansi kwe-1m nangaphansi kwama-30mins, itracker ayibanga nomthelela.
Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Ukukhanya kwesitshalo, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Isitshalo sikhule ukukhanya, Khulisa i-Lightin, Khulisa ukukhanya,